“Waxaan la tartami doonaa Kooxaha Liverpool iyo Manchester City” – Timo Werner – Gool FM
“Waxaan la tartami doonaa Kooxaha Liverpool iyo Manchester City” – Timo Werner
(London) 02 Seb 2020. Xiddiga dhawaan galka ah kooxda Chelsea ee reer Germany Timo Werner in Frank Lampard uu diyaarinayo ciyaartooy, si ay ula tartamaan kooxaha Manchester City iyo Liverpool xilli ciyaareedka cusub.
Timo Werner ayaa xagaagan ugu dhaqaaqay kooxda Chelsea lacag dhan £ 47.5 million, wuxuuna kaga soo dhaqaaqay kooxda reer Germany ee RB Leipzig, isagoo saxiixay heshiis shan sano ah.
Ilaa iyo haatan, Chelsea ayaa si isdaba joog ah ugu socota wadada ay dib ugu laabaneyso u dagaalamida tartamada oo dhan mar kale, kaddib markii ay dhameystirtay shan heshiis muhiim ah, waxayna ilaa iyo haatan la soo sxiixatay xiddigaha kala ah Hakim Ziyech, Malang Sarr, Ben Chilwell, Thiago Silva iyo Timo Werner.
Timo Werner ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee kooxda Chelsea wuxuu ku sheegay:
“La shaqeynta Frank Lampard aad ayey u fiicneyd baryahan, wuxuu kooxda oo dhan u sharaxay qaabka ay u ciyaareyso, iyo inaan awoodno inaan sidaas ku sameyno garoonka dhexdiisa, iyo sida ay kooxda horumar ku sameyn karto marka loo fiiriyo xilli ciyaareedkii hore”.
“Waxa uu ahaa mid cajiib ah qaabka uu faahfaahinta noogu sharaxayay, wuxuuna ka hadlayey qorshayaashiisa mustaqbalka iyo sida uu u doonayo inaan ula dagaallano oo aan ula tartano kooxaha Manchester City iyo Liverpool”.
“Chelsea waa koox weyn, kooxdan hada waxaan u maleynayaa inaan gaari karno heer sare” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Timo Werner.
“Bixitaanka Lionel Messi waxay faa’iido u tahay kooxda Real Madrid” – Toni Kroos